प्रिन्ट संस्करण - लभ इन कश्मीर - हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
माघ २८, २०७३-बिदा हुने दिनको चिसो बिहानी । कसलाई पो बेड छाड्ने मन हुन्छ र ? घामका किरण फैलँदै गर्दा ज्यान गुडुल्की पर्दै जान्छ र खुम्चन थाल्छ– सिरक । एक वर्षअघि ‘फेब्रुअरी फोट्टिन’ अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेको बिहानी म चिसोलाई ‘च्यालेन्ज’ गर्दै सिरकमा गुटमुटिएँ । मीठो ‘मोर्निङ स्लिप’ बाट त्यसबेला झसंग भएँ– जब साईसाई र सुईसुईको आवाज झ्यालको सिसा छेडी भित्र छिर्‍यो । लाग्यो– ‘आज फेरि प्रोटेस्ट सुरु भएछ ।’
‘नेचुरल ब्युटी’ का लागि कश्मीर जति ‘फेमस’ छ, उत्तिकै चर्चित छ सुन्दर युवती अनि सुगठित युवकका लागि । कश्मीरबाट फर्केको भन्नेबित्तिकै ‘ओहो, कश्मीर की कली’ भन्दै आँखा झिम्क्याएर जिस्काउनेहरू हुन्छन् । तर सुरक्षा घेरा, काँडेदार र कफ्र्युमा जेलिएको कश्मीरमा प्रेम गर्न पनि कहाँ सजिलो छ र ? एकातिर बिहान घरबाट निस्किएको ज्यान बेलुका सकुशल फर्कला, नफर्कलाको चिन्ता र अर्कोतिर कडा ‘इस्लामिक अनुशासन’ लाई छल्दै गरिने प्रेम चुनौतीपूर्ण हुने त भइहाल्यो, रोमाञ्चकसमेत बन्दोरहेछ । सन् १९९० ताका सल्किएको हिंसात्मक आन्दोलनको राप र ‘प्योरेटेरियन इस्लामिक ग्रुप’ को बढ्दो प्रभावले कश्मीरी समाजमा धेरै कुरा सहज छैनन् । जहाँ सामान्य दैनिकी सहज हुँदैन, त्यहाँ लुकेर गाँसिने माया पिरती सजिलो हुने कुरै भएन ।
कारमा सफर गर्दै गरिने डेटिङबाहेक युवायुवतीहरू पार्कमा जाने, दल लेकमा गएर बोटिङ गर्ने, रेस्टुरेन्टमा बसेर घण्टांै गफिने तथा क्याफे कफी डे (सीसीडी) जस्ता कफी सपमा बसेर रमाउनेसमेत गर्छन् । श्रीनगरमा प्रेमी–प्रेमिकाका लागि यस्ता घुम्ने स्थान हुन्– निगिन, सालिमार, निसाद र चिनार पार्क ।
‘हामी लामो समयदेखि मुस्लिम त भयांै, तर सांस्कृतिक रूपमा हिन्दुबाट रूपान्तरण हुन सकेका छैनौं,’ कश्मीर युनिभर्सिटीमा जेन्डर स्टडिजकी उपप्राध्यापक हुमैरा सौकत भन्ने गर्छिन््, ‘अरू बेला कतै नदेखिने जातीय विभाजन विवाहका बेला भने देखिन्छ, त्यसैले अधिकांश प्रेम विवाहमा परिणत हुनै सक्दैनन् ।’
सौकतले भनेझैं कश्मीरमा प्रेम सफल भएर विवाहमा परिणत हुने संख्या न्यून भए पनि गोला, बारुद,
कफ्र्यु, हिंसा र कडा धार्मिक एवं पारिवारिक नियमलाई तोड्दै युवायुवतीले आफ्नो प्रेम यात्रालाई जारी
राखेका छन् ।